I-Best YC-170-1 Automatic Ultraonic Cookies Cutter Ice box Cookies Machine Manufacturer and Factory | Yucheng
I-YC-170-1 i-Automatic Ultraonic Cookies Cutter Ice box Amakhukhi Umshini
Umshini we-YC-170-1 othomathikhi we-Ultraonic Cookies umsiki we-Ice Cookies Machine uhlanganisa umshini we-Encrusting, umshini wokusika we-ultrasonic nomshini wethreyi, ungakhiqiza amakhukhi e-ice box ngaphandle kweqhwa, ubuso bushelelezi, futhi ikakhulukazi amakhukhi amakinati, angasika ngqo ngaphandle iqandisiwe, ithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza.
I-YC-170-1 i-Automatic Ultraonic Cookies Cutter Ice box Cookies Machine esebenza nge-ultrasonic cutter engenza amakhukhi amaningi e-ice box njengama-panda cookies, amakhukhi we-Penguin, amakhukhi we-heart shape, amakhukhi we-mosaic, ama-slicer cookies nokunye.
Ubukhulu bomshini 1200x800x1300mm
Ububanzi bommese 200mm
Amandla 20-120pcs / iminithi
Umshini wokusika we-Ultrasonic wenzelwe ukusikwa kokudla ngejubane lokusika imimese eyi-110 ngomzuzu, ukunemba kwe-1 mm.
Usayizi womkhiqizo osikiwe ungalungiswa ngokuya ngezimo zokukhiqiza zangempela, nokusika okungafakwa ohlelweni lwekhompyutha ngaphambi kwesikhathi. Futhi kungabizwa ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sokulawula isikrini sokuthinta.
Isilayi se-ultrasonic singaxhunywa ku-extruder yomugqa owodwa ngaphambili, futhi singasika umkhiqizo ngokuqhubekayo, futhi ukusebenza ngokusika kuphezulu.
Ngemuva kwalokho, ingaxhunyaniswa nomshini wokupakisha, futhi ulayini womhlangano ungazenzekelayo.
1. 20-120pcs / min, 1.5times ngokushesha kunomshini ofanayo.
2. Iphutha lomkhiqizo ngamunye ngaphakathi kwe-1g, futhi sizoba nentuthuko minyaka yonke.
3. Kulula ukusebenzisa umshini, ungawusingatha umshini ngoqeqesho lwamahora ama-3.
4. Zonke izingxenye zikagesi zamukela isisombululo esisodwa sokumisa esinikezwe yi-DELTA, njenge-PLC, invertor.
5. Umshini ungakhumbula iresiphi, udinga nje ukulungisa amapharamitha ngasikhathi sinye somkhiqizo owodwa.
6. Kutholakalela ukudla okuhlukahlukene, kufaka phakathi isinkwa, isinkwa se-burger, isinkwa esigcwalisiwe, isinkwa sikakolweni sonke, njll.
7. Yenzelwe imboni.
8. Izinto zokwakha zamukela i-SUS304, uhlobo lwebanga lokudla.
9. Kulula ukuqaqa izingxenye, nokuhlanza umshini kudinga isikhashana.
Lo mshini wokuhlanza we-ultrasonic wokudla ungasetshenziswa ekudleni kokubhaka (amakhekhe, isinkwa, i-pizza, ama-sandwich, njll.) Amise okweyindilinga, elingunxande, elingunxantathu, njll ukufeza umphumela omuhle wokusika.
Sakha futhi sikhiqize izixhobo ze-ultrasonic esizithengisa njengamayunithi aphelele noma ukuhlangana ngakunye okufana nama-generator nabaguquli. Amakhasimende ethu nabakhi bemishini yenhloso ekhethekile bayazuza ezintweni ezisezingeni eliphakeme kanye nemishini enokusebenza okulula, okusebenziseka kalula. Sizibophezele ekunikezeni izixazululo ezingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu, sinikeze okwakamuva kwezobuchwepheshe, emikhiqizweni nasezinhlelweni.
Isici se-Ultrasonic Cutting Machine:
1. Ukuzuza imfucuza encane nokukhipha okukhulu
2. Inhlanzeko, kulula ukuyihlanza
3. Ubuso obusikiwe bushelelezi futhi buhlelekile, abunamathele, futhi imikhiqizo enezingqimba eziningi ayinambala.
Isistimu ehlakaniphile, elula nokusebenza, ukushintsha okulula kwemikhiqizo eminingi.
5. Ngemuva kokuthi ukulungiswa kuqediwe, inkinobho eyodwa iyaqala, ukusika okuzenzakalelayo ngokuphelele.
6. Imvamisa ezenzakalelayo yokujaha umthombo wamandla wokushayela we-ultrasonic ilandelela imvamisa yokusika ye-ultrasonic ngesikhathi sangempela, kanti ummese wokusika we-ultrasonic usebenza esimweni esizinzile, esifanele ukusebenza ngokuqhubekayo isikhathi eside.
Uma unesithakazelo kumshini wethu we-chocolate chip cookies inhlama yomshini wokusika we-ultrasonic, wamukelekile ukuthenga imishini yangokwezifiso nabakhiqizi bethu abaqeqeshiwe nabahlinzeki eChina. Ikhwalithi ephezulu, ukusebenza okuthembekile nentengo yokuncintisana kungaqinisekiswa.
Langaphambilini YC-168 okuzenzakalelayo Amaphrotheni Ball Machine
Olandelayo: Umshini we-YC-170 othomathikhi we-Crystal Moon Cake Machine
Umshini we-Ice box Cookies
umshini wekhukhi weqhwa
umshini we-cookie we-ultrasonic